Ezona Bhotshi zeTikTok zibalaseleyo kwiMarike
Ezona bhotshi zibalaseleyo zeTikTok kwiMarike kunye nendlela yokukhusela iakhawunti yakho
Iintsuku ezi-3 zesilingo sasimahla
Landela/Yeka ukulandela isimbo esizenzekelayo
Ikhuseleke kakhulu nge-proxy eyakhelwe-ngaphakathi
Smart algorithm kunye nezantya ezikhawulezayo
Ukuze ufumane iinkcukacha ezithe vetshe
Akukho silingo sasimahla okwangoku
Khusela useto kodwa akukho proxy
Useto lwe-Smart nakwiphakheji esisiseko
Akukho lingo - $ 15 ngeveki
Khusela iqonga kodwa akukho proxy
Ujoliso oluhlakaniphile kunye noseto
Akukho silingo sasimahla sikhoyo
Landela/Ungalandeli isitayile sebhot
Useto oluphezulu kunye nenkxaso
Akukho lingo kodwa luyafikeleleka kwi-15 yeedola ngenyanga
Ukuzenzekela ngokusekwe kuLandela/Ungalandeli/Uthanda
Akukho proxies, ngokuqinisekileyo ngokufanelekileyo
Ujoliso oluchanekileyo kunye nokusebenza kakuhle
Akukho lulingo lukhoyo
Akukho proxy kodwa iqonga elikhuseleke kakhulu
Ukujoliswa okuhlakaniphile kunye nokulungelelaniswa kwesantya
Landela/Yeka ukulandela/Njengebhot yesimbo
Akukho sethingi yommeli ekhoyo
I-TikTok liqonga leendaba lamva nje leendaba ezibone ukukhula okungazange kubonwe ukusukela oko yakhululwa ngoSeptemba ka-2016..
Ikhule ngokuxhuma kunye nemida kwaye ibe yenye yezona zinto zikhuphisanayo kwimidiya yoluntu, kwaye ngesizathu esihle.
TikTok luhlobo lwephupha lomthengisi, kunye nobude beseshoni kunye izinga lothethathethwano phakathi kweyona ndawo iphakamileyo kuwo onke amaqonga Imidiya yokuncokola.
Ayimangalisi ke into yokuba ngoku kukho ii-bots zeTikTok emarikeni ukuze zizenzele imisebenzi ethile., indlela yokulandela, kwikhusi, phawula kwaye uthande iiposti.
Besifuna ukwazi ukuba zeziphi iibhothi ezikhoyo, ukuba ziqhuba kakuhle kangakanani kwaye zifanelekile na ukuqwalaselwa ngabaphembeleli kunye nabathengisi.
IiBots eziphambili zeTikTok
Sijonge ezisi-7 zezona zidumileyo zeTikTok Bots ezikhoyo namhlanje:
Tik Tok Bot -Eyona TikTok Bot ibalaseleyo kwimarike, #1 ngokude.
TikTool – Ukukhula kakuhle, inokuthenjwa, ngeempawu ezikrelekrele – #2.
TokUphuculo –Fakela kwaye ulibale – n°3
UJeffrey -Iqonga elihle elinohlalutyo oluhle – n°4.
Instamb -Indlela elula esebenza kakuhle – n°5.
Ukukhula kweTok -Inkulu kubaqalayo kodwa ayigxininisi – n°6.
Vire -I-automation ecothayo xa ithelekiswa nezinye iinkonzo – n°7.
TikTokBot.io ikunceda ukuba wongeze iakhawunti yakho ngokuzibandakanya okuzenzekelayo kwaye inamandla okukunika amawakawaka abalandeli kuxhomekeke ekubeni ibot isebenza ixesha elingakanani.
Siqhube iTikTokBot iiveki ezimbalwa kwaye sachukunyiswa ngumgangatho weempawu kunye neziphumo.
Ukufakela kwakhawuleza kwaye kulula, kwaye zininzi izinto onokuthi udlale ngazo kunye nokwandisa i-automation yakho.
Ixabiso – $$ – $29.90 p/m
Iimpawu – 4/5 – Landela/Ungalandeli i-automation enenketho ezininzi zokujolisa, i-algorithm ehlakaniphile kunye nohlalutyo.
Ukhuseleko – 4.5/5 – Uqhagamshelo olukhuselekileyo kunye neproksi yeselula ibandakanyiwe.
Uncedo – 4.5/5 – Inkxaso yabathengi bePremium ukukunceda kuhambo lwakho.
Phawula – 4.5/5 – Yeyona ilungileyo kuzo zonke iindawo kwaye sithande kakhulu ukusetyenziswa lula kunye nokugxila kukhuseleko..
TikTool isebenzisa Landela/Yeka Ukungalandeli isimbo esizenzekelayo esineempawu ezongezelelweyo ezimbalwa.
Izixhobo zokucebisa ezihlakaniphileyo kunye ne-hashtag efunyenweyo inika umphetho omncinci kukhuphiswano.
Ixabiso lokhetho olusisiseko liphezulu kakhulu, leyo yenkonzo yeprimiyamu, ngokukhawuleza nangaphezulu, iphezulu.
Ixabiso – $$ – $29 p/m
Iimpawu – 4.5/5 – Iimpawu ezigqwesileyo, kuquka ii-hashtag ezihlakaniphile kunye neengcebiso.
Ukhuseleko – Ukuba ujonga ngokusondeleyo kumaphepha anabalandeli abamalunga ne-100,000/Ukuba ujonga ngokusondeleyo kumaphepha anabalandeli abamalunga ne-100,000 – Iqonga elikhuselekileyo kodwa akukho zikhetho ezakhelweyo zommeli.
Uncedo – 3.5/5 – Inkxaso esisiseko ngaphandle kokuba ukhetha inkonzo ye-premium ngexabiso eliphindwe kabini.
Phawula – 4/5 – Iqonga elihle kakhulu kodwa akukho proxy iyenza phantsi.
Ukuphucula wanconywa kakhulu, ngoko kwafuneka siyizame.
Banezicwangciso ezibini zokuba uqalise – rhoqo kunye nepro.
Kuzo zombini ezi meko, ufumana umphathi weakhawunti ozinikeleyo kunye nenkxaso epheleleyo.
Ixabiso – $$$ – $ 60-100 p / m
Iimpawu – 3.5/5 – Uhluzo olukhulu kodwa lujolise kuphela kwiiakhawunti.
Ukhuseleko – 3.5/Ukuba ujonga ngokusondeleyo kumaphepha anabalandeli abamalunga ne-100,000 – Iqonga elikhuselekileyo kodwa kuya kuba kuhle ukubona ummeli.
Uncedo – 4/5 – Umphathi weakhawunti ubandakanyiwe.
Phawula – 3.5/5 – Inkonzo efanelekileyo kodwa ifuna ukhuseleko oluthe kratya kweli nqanaba lexabiso.
UJeffery ligama leTikTok bot enkulu.
Umgangatho wokulandela / ungalandeli i-automation ukuqala ukuzisa abo balandeli.
Banezicwangciso ezimbini ezihlawulelwayo – Uqala Ishishini, ezikhupha isixa se-astronomical 349,$99 ngenyanga.
Kude kube ngoku, iingxelo bezintle kakhulu kwaye bafumene uphononongo oluninzi oluhle.
Ixabiso – $$$ – $49.99 p/m
Iimpawu – 4/5 – Ukujolisa, izibalo ezihlakaniphile kunye nezicwangciso zibonelela ngokulula okukhulu kokusetyenziswa.
Ukhuseleko – Ukuba ujonga ngokusondeleyo kumaphepha anabalandeli abamalunga ne-100,000/Ukuba ujonga ngokusondeleyo kumaphepha anabalandeli abamalunga ne-100,000 – Iqonga elikhuselekileyo kunye nommeleli wabucala obandakanyiweyo.
Uncedo – 4/5 – 24 iyure inkxaso kubathengi, Iintsuku ezisi-7 nge-7.
Phawula – 4/5 – I-automation enkulu ephawula zonke iibhokisi, ibiza kakhulu.
Instamb Khangela iTikTok, iyafana ne-Auto Tokker, ikuvumela ukuba ufumane izinto ezizithandayo kunye nabalandeli, zonke zisekwe kwigama lomsebenzisi kunye ne-hashtag.
Ixabiso eliphantsi, kodwa nangona kunjalo ibonelela ngeqonga elilungileyo lokukhulisa iTikTok yakho.
Ikwisiphelo esisezantsi sesikali kodwa isabonelela ngeqonga elilungileyo lokukhulisa iTikTok yakho.
Ixabiso – $ – $15 p/m
Iimpawu – 3.5/5 – Igama lomsebenzisi eliqhelekileyo kunye ne-hashtag ekujoliswe kuyo.
Ukhuseleko – Ukuba ujonga ngokusondeleyo kumaphepha anabalandeli abamalunga ne-100,000/Ukuba ujonga ngokusondeleyo kumaphepha anabalandeli abamalunga ne-100,000 – Uqhagamshelo olukhuselekileyo kodwa akukho lukhetho lommeli.
Uncedo – 3.5/5 – Inkxaso ye-Intanethi.
Phawula – 3.5/5 – Inkonzo elungileyo yokuzenzela, kodwa ifuna ummeli.
Ukukhula kweTok yinkonzo esebenzayo enikezela ngeempawu ezilungileyo.
Wamkela indlela eqhelekileyo ebandakanya ukucebisa iifomula ezi-2, Umqalisi kunye nePro.
I-Pro ikunika useto olungcono kakhulu, kodwa ngexabiso eliphezulu.
Iimpawu – 3.5/5 – I-Hashtag ijolise kuphela kwisicwangciso sokuQalisa.
Ukhuseleko – Ukuba ujonga ngokusondeleyo kumaphepha anabalandeli abamalunga ne-100,000/Ukuba ujonga ngokusondeleyo kumaphepha anabalandeli abamalunga ne-100,000 – Khusela iqonga kodwa akukho zikhetho zommeli.
Uncedo – 3/5 – Ukunqongophala kwenkxaso ezinikeleyo.
Phawula – Ukuba ujonga ngokusondeleyo kumaphepha anabalandeli abamalunga ne-100,000/5 – Akukubanga, kodwa ngexabiso, kunokuba ngcono.
Vire ndine-hype eninzi mva nje, kodwa asiqinisekanga ukuba oku kuyathetheleleka.
Kuwo onke amaqonga esiwaphononongileyo, yeyona ikhangeleka iyeyona ibiza kakhulu eneempawu ezincinci.
Nangona kunjalo, inika ulawulo olupheleleyo lweakhawunti, enokuba nomtsalane kwabanye abantu.
Ixabiso – $$$ – $100 p/m
Iimpawu – 3/5 – Ukujoliswa kweHashtag kunye nezinye iimpawu.
Ukhuseleko – Ukuba ujonga ngokusondeleyo kumaphepha anabalandeli abamalunga ne-100,000/Ukuba ujonga ngokusondeleyo kumaphepha anabalandeli abamalunga ne-100,000 – Akukho bungqina bokuhambelana kommeli.
Uncedo – 4/5 – Abaphathi beeakhawunti kunye neNkxaso ye-Intanethi.
Phawula – Ukuba ujonga ngokusondeleyo kumaphepha anabalandeli abamalunga ne-100,000/5 – Okulusizi kukuba ayihambelani ne-hype.
Uyikhusela njani iakhawunti yakho yeTik Tok ekuValweni ?
Imidiya yoluntu iye yavalwa okwethutyana kwaye ilapha ngezizathu ezilungileyo.
Banqanda abasebenzisi ekusebenziseni kakubi imida ukuqhubela phambili ukukhula kwabo, ngamanye amaxesha kunokwenza kube nzima ukukhulisa abalandeli bakho.
Le mida iya kuhlala ikhona, ke eyona nto ingcono onokuyenza ukukhusela iakhawunti yakho yeTikTok kukusebenzisa i-akhawunti ummeli ophathwayo.
Ummeli ophathwayo uthetha ukuba uqhagamshelo lwakho kwiTikTok luyafana nesikhangeli esiphathwayo, eqinisekisa ukuba inqaku lakho lokuthembela aliyi kuchaphazeleka ukuba udlula imida.
Kubalulekile ukukhumbula ukuba ukuvalelwa kunye nokuvalelwa zizinto ezimbini ezahlukeneyo., njengoko kubonisiwe ngezantsi:
Ibhloko idla ngokuthetha ukuba uthintelwe ekwenzeni izenzo
Ukuvalwa kukhutshwa xa iakhawunti yakho isuswe okwethutyana okanye ngokusisigxina kwinkonzo.
Kutheni iakhawunti yakho yeTikTok itshixiwe ?
Iakhawunti yakho yeTikTok inokuvalwa ngenxa yezizathu ezahlukeneyo.
Oku kwenzeka rhoqo xa:
Ulandela abantu abaninzi ngokukhawuleza
Uthanda izithuba ezininzi kakhulu
Izimvo zakho ziyi-spammy kwindalo
Uthumela into echasene nezikhokelo zoluntu
Ukuba ulandela TikTok izikhokelo zoluntu kwaye ungathumeli nantoni na engamanyala, mhlawumbi awuyi kuba naziphi na iingxaki.
Zeziphi izizathu eziphambili zokuba kutheni iakhawunti yakho ivaliwe ?
“Ukuthatha inxaxheba kumxholo we-cyberbullying, intetho yentiyo okanye intiyo okanye intiyo echasene nomntu okanye iqela labantu ngenxa yohlanga lwabo., ngokobuhlanga babo, yenkolo yabo, ngobuzwe babo, yenkcubeko yabo, yokukhubazeka kwabo, ngokuziqhelanisa nesondo, yesini sabo, yobuni babo ngokwesini, ubudala babo okanye naluphi na olunye ucalucalulo lunokukhokelela kuthintelo” ngokwemigaqo yoluntu.
Izithuba ezingenanto – Esi sisizathu esicacileyo kwaye esinye esibangele iingxaki kubantu abaninzi I-Instagram. Akukho nkampani yemidiya yoluntu efuna ubunqunu kwiqonga labo, ingakumbi ejoliswe kubaphulaphuli abancinci. Licebiso elilungileyo ukugcina zonke iividiyo zicocekile.
Thumela imiyalezo malunga nemipu okanye iziyobisi ezingekho mthethweni – Naziphi na izithuba malunga nemipu okanye iziyobisi zichasene nezikhokelo zoluntu kwaye zinokuba phantsi kokuvalwa umlomo ixesha elide.
Ukupapashwa komxholo onelungelo lokushicilela – Kuyacetyiswa ukuba ungaphindi usebenzise umxholo onelungelo lobunikazi kwiividiyo zakho zeTikTok. Ukwenza ukuveliswa okucacileyo kweevidiyo zabanye abasebenzisi abadumileyo kunokubangela ukuvalwa okufihlakeleyo.
Kuhlala ixesha elingakanani ukuValwa kweTikTok ?
Elona xesha liqhelekileyo lokuvalwa umlomo limalunga neentsuku ezili-14.
Nangona kunjalo, ukuba uthe gqolo ukwaphula izikhokelo zoluntu, ungalungela ukuvalwa ixesha elide, elingenammiselo.
UJongana Njani neSithintelo soBubele ?
Ungalinda ukuba iakhawunti yakho idumile. Unokwenza iakhawunti entsha yeTik Tok.
Abanye abasebenzisi bakhankanya ukuba idilesi yabo ye-IP ivaliwe ngokupheleleyo, ngoko ekuphela kwendlela yokuyilungisa kukutshintsha idilesi yakho ye-IP.
guqula ngokulula nayiphi na iakhawunti ye-Instagram
Esona sixhobo silungileyo sokuKhula kwe-Instagram
I-Instagram ayivumi ukuba ndingene : Facebook
Zeziphi ezona zibalaseleyo ze-Instagram Bots ngo-2020 kunye nendlela yokugcina iakhawunti yakho ikhuselekile?
Ungaqhagamshelana njani nabaphembeleli kwi-Instagram
Indlela yokongeza ibali kwi-Instagram
Izizathu ezi-5 kunye nendlela yokuyilungisaZeziphi ezona zibalaseleyo ze-Instagram Bots ngo-2020 kunye nendlela yokugcina iakhawunti yakho ikhuselekile?
Izizathu ezi-5 kunye nendlela yokuyilungisaIireels ze-Instagram : Impendulo ye-Instagram kwiTikTok
Izizathu ezi-5 kunye nendlela yokuyilungisa -
Izizathu ezi-5 kunye nendlela yokuyilungisa
© Izizathu ezi-5 kunye nendlela yokuyilungisa - WinchesClub.com umthetho wabucala